Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ILufthansa Group yazisa ngeGosa eliyiNtloko lesiCwangciso
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
UJörg Eberhart uqeshe iGosa eliyiNtloko lesiCwangciso seQela laseLufthansa
UJörg Eberhart uza kungena ezihlangwini zikaWilliam Wilms, owonyulwe ukuba abe kwiBhodi eLawulayo yeLufthansa Technik ngomhla woku-1 Septemba 2021.
ILufthansa Group yazisa ngokuqeshwa ngokutsha.
Intloko Entsha yeQhinga noPhuhliso loMbutho egama lingu.
UJorg Eberhart uzakuthatha isikhundla ngo-Novemba 1, 2021.
Nge-1 ka-Okthobha i-2021, uJörg Eberhart, okwangoku u-CEO we-Air Dolomiti, uzakuthatha isikhundla "seNtloko yeQhinga noPhuhliso loMbutho" kwiLufthansa Group. Uza kungena ezihlangwini zikaWilliam Wilms, owonyulwe kwiBhodi eLawulayo yeLufthansa Technik ngomhla woku-1 Septemba 2021.
UJörg Eberhart usebenze njengoMongameli kunye ne-CEO ye Air Dolomiti ukusukela ngo-2014. Ngeli xesha, wayelilungu leBhodi eLawulayo yeLufthansa CityLine. Ngaphambi koku, wayebambe izikhundla ezininzi zolawulo e Iqela leLufthansa oko kubandakanya ukubayinxalenye yokusekwa kweAerologic GmbH nokuphunyezwa kweprojekthi ye-SCORE.
UJörg Eberhart ufundele ukulawulwa kweshishini kwiYunivesithi yaseTübingen kwaye uphethe iphepha-mvume lokuqhuba kwi-Airbus A320.
Iqela laseLufthansa liqela lokuhamba ngenqwelomoya elisebenza kwihlabathi liphela. Ngabasebenzi abangama-110,065, iQela laseLufthansa lavelisa ingeniso ye-EUR 13,589 yezigidi zeerandi kunyaka-mali we-2020.
Iqela laseLufthansa lenziwe ngamacandelo eeNqwelo moya, iiEurowings kunye neeNkonzo zoPhapho.
Iinkonzo zezoPhapho ziquka amacandelo oLungiselelo, iMRO, ukuPheka kunye noShishino olongezelelweyo kunye neMisebenzi yamaQela.
Ezi zokugqibela zibandakanya iLufthansa AirPlus, iLufthansa yoQeqesho loPhapho kunye neenkampani zeIT. Onke amacandelo ahlala kwindawo ekhokelayo kwiimarike zawo.